अभिनेत्री प्रियंकाको एमएमएस लीक: भन्छिन्- ‘त्यो युवती म होइन्’ – Kavrepati
Home / मनोरंजन / अभिनेत्री प्रियंकाको एमएमएस लीक: भन्छिन्- ‘त्यो युवती म होइन्’
अभिनेत्री प्रियंकाको एमएमएस लीक: भन्छिन्- ‘त्यो युवती म होइन्’
admin September 12, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 265 Views
भारतिय चलचित्र बजारमा नायिकाहरूको एकपछि अर्को एमएमएस लिक भइरहेको छ । केहि दिन अघि भोजपुरी फिल्म उद्योगकी अभिनेत्री त्रिशाकर मधुको एमएमएस भिडियो लिक भएको केही दिनमा नै अर्की अभिनेत्री प्रियंका पंडितको भिडियो लिक भएको छ ।
भिडियो लिक भएपछि आ-क्रोश पोख्दै एमएमएस लिक हुनुमा आफ्नो दुश्मनको हात रहेको बताएकी थिइन् । उनले एमएमएस आफैले बनाएको पनि स्वीकार गरेकी थिइन् । तर, प्रियंकाले भने भिडियोमा भएकी युवती आफू नभएको दाबि गरेकी छिन् ।
उनले व्यक्तिगत दुश्मनीका लागि भिडियो लिक गरेको भन्दै एफआईआर पनि दर्ता गराएको बताइकी छन् । उनको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनिरहेको छ ।
प्रियंका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहन्छिन् । उनका इन्स्टामा ५ लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन् । उनले ५० भन्दा बढी भोजपुरी फिल्ममा काम गरि सकेकी छन् ।
अन्य समाचार : आहा ! अन्जु पन्त र पति यसरी रमाइलो गर्दै,छमछमि नाच्दै (हेर्नुस् भिडियो ) चर्चित गायिका अञ्जु पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिएसगै चर्चा सकिएको छ । अञ्जु पन्तले थीर कोइरालासँग विवाह गर्न गरेकि हुन् । तपाईंलाई जानकारी गराउ कि यो उनको दोस्रो विवाह हो । उनले छोरी परितोशिकाको अनुरोधका कारण विवाह गर्न लागेको स्रोतको दावी गर्दै आएको छ । परितोशिकाले केही अन्तरवार्ताहरुमा आफुले आमालाई दोस्रो विहेका लागि अनुरोध गरेको कुरा बताउँदै आएकी थिइन् ।
Previous मेरी आमाको मृत्युको कारण पनि तेजबहादुर नै भएको भन्दै आरोप लगाउंदै हिडेका थिए लोकबहादुर
Next उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानि छ? यसकारण हुनसक्छ हानिकारक, जानिराखौं।